Ukuhleleka kwamabutho amaZulu
Amandla esizwe samaZulu
Ngesikhathi sokubusa kukaShaka kanye nabahluleli bakhe, ukukhula namandla esizwe sakwaZulu babekwe enhlanganweni yabo yamasosha namakhono. Amasosha ayehlelwe nxazonke ohlelweni lokubuthwa (ukubhaliswa) okwakunqotshwa ukugubha umkhosi. Ngokwesistimu, isethi ngayinye yobudala, eyisiqhema samadoda asesilisa ofanayo ubudala, sasihlanganiswa embusweni ofanayo (ibutho ngobunye, amabutho amaningi).
I-Ukubuthwa nayo isetshenziselwa amantombazane, kodwa ezimweni eziningi babeyinto yokubeka iminyaka esikhundleni sokubusa. Amabutho ayehlala ezindlini zamasosha (inhloko eyodwa, ama-akanda amaningi) kuwo wonke umbuso, owawulawulwa isihlobo esiseduze senkosi noma othile omiswe nguye. Amakamelo ayefana nokuklama nokuhlelwa kumzi ovamile, kodwa ngezinga elikhulu kakhulu.
Ngaphandle kwemisebenzi yezempi, lezi zinsizwa (izinsizwa) zazibandakanyeka ekulungiseni nasekulondolozeni izindlu zabo futhi zacelwa ukuba zenze imisebenzi yazo zombili izindlu kanye nezindlu zasebukhosini. Babesebenza njengabagcini bemfuyo yezwe, izithunywa zenkosi kanye namaphoyisa asekhaya, futhi babheka ukukhiqiza ukukhiqiza indlu yasebukhosini. Isici esibalulekile senhlangano yezempi kwakuwukuthi kwakukhona njalo amadoda aqhubeka nokuqeqeshwa empini ngakho-ke kwakulula ukuba inkosi iqoqe ibutho lempi eliphumelelayo ngesaziso esifushane.
Amasu okulwa awakhiwa yiShaka ayeguquka futhi adlala indima ebalulekile ekukhuleni kwezempi yamaZulu kanye nezepolitiki. Into yokuqala uShaka enza ngayo kwakuwukushintsha amacacu okulwa nendabuko. Ngaphambi kokubusa kwakhe, amabutho aphikisanayo ayesebenze futhi aphikisana imikhonto yawo.
U-Shaka usungula ukulwa okuhlangene ngezandla ngokusebenzisa amacembe amakhulu okugwaza amade amade. Wanciphisa izihlangu ezilinganisweni eziningi futhi waqeqesha amadoda akhe ukuba asebenzise izihlangu zawo ukuze aphike isihlangu sabamelene naye futhi asigqekeze eceleni, ngaleyo ndlela avule umcibisholo wakhe wesobunxele kumkhonto wompi waseZulu. U-Shaka uphinde wahlakulela isu lokugxilisa amasosha akhe ekuqalisweni kwempi efana nekhanda lezinyosi.
Phakathi nendawo noma 'isifuba' kwakuyisixuku esikhulu samadoda, ahlanganisa abadlali abanolwazi kakhulu. Zathunyelwa ezinkambisweni ezimbili ezifanayo, ukuze amasosha angaphambili ahlanganyele isitha, kanti labo abasemuva babezofihliwe bangaboni. Leli qhinga laklanyelwe ukukhohliswa isitha ukuze bakholelwe ukuthi baphikiswa amandla amancane, futhi okwesibili ukuze amasosha abanjwe endaweni yokugcina angakwazi ukuqinisa amasosha angaphambili uma kunesidingo.
Njengoba bebengaba abasha, bangaphinde baxoshe futhi bangabikho othandweni isitha esinqotshweyo emuva. Ukusuka esifubeni kwakunezimpondo ezimbili okuhlose ukusizungezela isitha. Lapho kuhlaselwa, inqubo evamile yayiwukuthi uphazamise uphondo olulodwa, kanti enye, ifihliwe ehlathini futhi utshani obude bungasakazeka engabonakali ukuzungeza isitha.
Lezi ziqhinga zabonakala ziyisici esinqunyiwe ekuphakameni okukhulu kweMbuso weZulu. Lapho ibutho lifeze isikhathi esithile senkonzo enkosini, okungaba yiminyaka engaba ngu-10, inkosi yayiyoyala ukuthi amalungu athile athile angashada futhi ahlabe emakhanda. Omunye wemiphumela yokulawula iminyaka lapho amadoda angashada khona kwakuyisilinganiso emphakathini wesiZulu phakathi kokukhula kwabantu kanye nezinsiza ezikhona.